LG Tone Free HBS-FN7: Joojinta buuqa firfircoon iyo wax badan oo badan | War gadget
Waxaan ku laabaneynaa culeyska falanqaynta sheyga codka, markan ka socda shirkadda South Korea LG kaas oo dhawaanahan suuqa ka soo saaray dhagaha dhagaha ugu badan ee "top of the range", kuwa aan in badan tijaabinay oo aan si dheer ugaala hadli doono.
Nagala soo bax LG Tone Free HBS-FN7, sameecadaha dhagaha leh kiis jeermis lagu dilo, buuq baajinta iyo waxqabad la yaab leh. Waxaan kuu sheegeynaa sida khibradeena guud ay ahaan jirtay headphones-kan oo siiyay wax badan in laga hadlo dhawaanahan iyo natiijada ka soo baxday kadib markii aan soo marnay miiska gorfeynta.
Markan waxaan kahadleynaa samaacadaha dhagaha ee kujira korka kore ee Ahraamta dhagaha dhagaha ee TWS oo leh buuq baajin, shaqeynta iyo qiimaha labadaba. Waxay aad ugu egyihiin aalad hore oo ka timid LG lafteeda oo aan wali soo marin miiska gorfaynta, dhammeystirka FN6 oo leh qiimo aad uga badan inta ku jirta daabacaddan maadaama ay ku yaalliin 99 euro, iyadoo maqnaanshaha muuqata joojinta buuqa firfircoon. Waxaan ka hadlaynaa xilligan LG Tone Bilaash HBS-FN7 (halkan LG FN7).
3 Is-maamul iyo tayada codka
4 Joojinta buuqa firfircoon iyo ra'yiga tifaftiraha
Astaantu waxay dooratay naqshad iyo wax soo saar "premium" ah. Waa dareenka aan si dhakhso leh ugu helno xiriirkeena ugu horreeya ee xirmooyinka iyo guud ahaan sheyga. Waxaan leenahay gebi ahaanba dhismaha balaastigga madow ee qeybta aan tijaabinay iyo nidaamka dhegta marka laga hadlayo afhayeenka sameecadaha, wax muhiim u ah markaan ka hadlayno aalado leh ANC (Firfircoonida Buuq Noqoshada ee loo soo gaabiyay Ingiriis). Kiiska xukunku wuxuu si buuxda u wareegsan yahay isla midabka kor ku xusan. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku iibsan karnaa midab cad haddii aan rabno, labadan midab ayaa ah palette la heli karo.
Cabbirada oo ka mid ah sanduuqa: X x 54,5 54,5 27,6 mm
Cabbirada of the samaacadaha dhagaha X x 16,2 32,7 26,8 mm
Kiiska xukunku wuxuu leeyahay Laydh tilmaamaya hawlgalka samaacadaha dhagaha oo aan lagu xusin astaanta banaanka, waa wax lala yaabo. Waxay ka samaysan tahay caag jilicsan, oo ka duwan sameecadaha dhagaha laftooda, waxayna iska caabisaa faraha faraha si fiican. Waa mid is haysta oo si fiican ugu habboon jeebkaaga, oo leh USB-C xagga dambe ee daboolka iyo badhanka isku xidhka ee dhinaca bidix.
Sidan oo kale, waxaan haynaa faahfaahin la yaab leh oo ah in sameecadaha dhagaha ay ku sii daayaan nalka UV-ga dhegaha si loo baabi'iyo bakteeriyada, nidaamka LGnano-ga LG wuxuu balanqaadayaa inuu yareeyo bakteeriyada 99,9% kaliya 10 daqiiqo oo soo-gaadhista nidaamkaaga. Si kastaba ha noqotee, waxaan xaqiijinay in iftiiminta UV-ga aysan qaadanayn 10 daqiiqo laakiin ay dhacdo dhowr ilbiriqsi.
Waxaan wajaheynaa samaacado sameecado leh hypoallergenic silicone pads iyo biyo diidmo leh shahaadada IPX4, sidaa darteed waxaan u isticmaali karnaa maalinba maalinta ka dambeysa xagga tababarka ama roobka yar.
Heerka isku xirnaanta waxaan leenahay Bluetooth 5.0, iyo sidoo kale suurtagalnimada isku xidhka labada Android iyo iOS mahadnaqa LG Codsiga Codsiga Bilaashka ah ee lagu soo dejisan karo adoo baaraya lambarka QR ee ku jira sanduuqa. Qeybta farsamada LG waxay bixisaa xog farsamo yar, marka waa inaan diirada saarnaa inta badan dareenka ay nooga tagayaan isticmaalkooda tijaabooyinkeena. Waxay leeyihiin laba makarafoon oo laba jibbaar ah iyo sidoo kale dhowr beddelaad Buuq Noqosho leh (ANC) oo aan ku hagaajin karno annaga oo la macaamilayno sameecadaha dhagaha iyada oo loo marayo qolka taabashada halkaas oo aan ka ciyaari karno muusig ama ka jawaabi karno wicitaanada.
Is-maamul iyo tayada codka
Qaybta xusida mudan waa suurtagalnimada in la fuliyo, marka lagu daro soo-celinta caadiga ah ee USB-C, Qi heerka Qiimaha wireless-ka oo kaliya adigoo ku dhajinaya saldhig dhaqameed. Sida batteriga waxaan u haynaa 55 mAh taleefanka dhegaha kasta iyo kiis 390 mAh ah. Shirkaddu waxay noo ballan qaadeysaa 7 saacadood oo loogu talagalay dhageysiga dhegaha iyo 14 kale haddii aan ku darno sanduuqa lacag-bixinta. Imtixaannadeenna waxaan ku helnay qiyaastii 5h 30m oo ismaamul ah iyadoo la joojiyay sawaxanka. Dabcan, waxaa xusid mudan in taas loo xuso USB-C Waxaan heli karnaa lacag hal saac ah oo la isticmaalo ugu yaraan shan daqiiqo oo lacag ah.
Koodh: AAC / SBC
Dhanka dhawaaqa, LG mar kale waxay dooraneysaa Meridian Audio ee Digital Signal Processing, si kastaba ha noqotee, afarta nooc ee adeegsiga ee dalabkaagu noo saamaxayo inaan la jaanqaadno sameynta cod tayo sare leh oo tayo sare leh. Waxaan si fiican u calaamadeynay basaska laakiin taasi ma dabooleyso codadka. Ma lihin koodhka loo yaqaan 'Qualcomm aptX codec', laakiin maanaan ku ogaan farqi aad u badan xagga dhagaha la galiyo ee sameeya. Khibraddeennu waxay ahayd mid lagu qanco oo waafaqsan qiimaha aan ku bixinnay badeecada, in kasta oo laga yaabo inaysan u tartamin sida AirPods Pro (aad uga qaalisan).
Joojinta buuqa firfircoon iyo ra'yiga tifaftiraha
Shirkaddu waxay noo ballanqaadaysaa inaan haysanno saddex makarafoon oo aan ku joojino buuqa in kasta oo ay tixraacayaan laba ka mid ah si ay u wadahadlaan. Marka la eego, sameecadaha dhagaha ayaa si fiican uga jawaabaya waxqabadka looga baahan yahay wicitaannada taleefanka. IYODhawaaqa ay taageerayaan labadiisa lakab diaphragm-ka ayaa khibrada ka dhigaya mid aad u wanaagsan iyada oo la tixgelinayo in aan ka hadlayno TWS dhegaha dhagaha. Marka guud ahaan waxay umuuqataa inaan helnay shey wareegsan oo wareegsan.
Waxaad ka heli kartaa LG Tone Free FN7 laga bilaabo 178 boggaaga gaarka ah ama xataa qiimo aad u badan oo tartan ah oo ka socda 120 euro oo ah Amazon.
Sameecadaha dhagaha ayaa si aad ah uga muuqda madow, oo leh xoogaa miyir qab ah oo naqshad leh, oo noqon doona midabka aan kugula talineyno. Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay falanqeynteena LG Tone Free FN7 oo ka socota shirkadda South Korea iyo dabcan waxaan ku xusuusinaynaa inaad nooga tagi karto wixii su'aalo ah ee ku saabsan sanduuqa faallooyinka. Sidaa si la mid ah, waxaan ku xusuusinaynaa inaad iska diiwaangelin karto kanaalkayaga YouTube-ka oo aan kaga tagnay waxyaabo badan oo xiiso leh oo hubaal inaadan rabin inaad seegto.
Cod Bilaash ah FN7
Ku dhejiyay: 28 April 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 27 April 2021
Waxyaabaha aadka u sarreeya iyo naqshadeynta
ANC iyo ismaamul wanaagsan
Nidaam jinsi oo aad u fudud
Qiimaha lagu hagaajin karo
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » LG Tone Free HBS-FN7: Joojinta buuqa firfircoon iyo waxyaabo kaloo badan